बौद्ध जोरपाटी सडकको विजोग, जनतालाई कहिलेसम्म सास्ती ? - Gokarna News
बौद्ध जोरपाटी सडकको विजोग, जनतालाई कहिलेसम्म सास्ती ?
बुधबार, असार २१, २०७४ by Gokarna News
असार २१, जोरपाटी । बौद्ध जोरपाटी सडक खण्ड वर्षौदेखि अवरुद्ध हुदै आएको छ । हिउँदे समयमा धुलो र माटोको सिकार बन्नु पर्ने र वर्षात समयमा हिलाम्मे अवस्थाको कारण सास्ती खेप्नु परेको छ ।
पर्यटकीय क्षेत्र बौद्धनाथ विश्व सम्पदा सूचिमा समेत परेको धार्मिक स्थल बाटोकै कारण अस्तव्यस्त बनेका छन् । सडक वीचमा ठूला–ठूला खाल्डा र पानी जमेका कारण वर्षातको समयमा विदेशी पर्यटक तथा पैदलयात्री हिन्न समेत कठिनाई भएको छ । सडक विग्रेका कारण सवारी सधानहरु पटक–पटक दुर्घटना समेत भईरहेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।
बाटोको अवस्था जटिल बन्दै गएत पनि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरु कुनै चासो नदिएकोमा सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन् । त्यस्तै काठमाडौं ३ नं. निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रामेश्वर फुयाँलकै सम्पर्क कार्यालय अगाडी समेत हिलाम्य अवस्थामा सडको स्थिति हुदा बाटो काट्न समेत नसकिएको अवस्था सिर्जना भएको, खानेपानीका ट्यांकर र सामान बोक्ने हेभ्भी ट्रकहरु समेत गुड्ने गरेकाले चाँडै र अध्यधिक रुपमा सडक विग्रेको स्थानीयहरु बताउछन् ।
सांसद रामेश्वर फुयाँलको गाडी गुडाउने सडक र कार्यालय अगाडी
अव्यवस्थित वस्ती तथा ढल विकास निर्माण कार्यका कारण वर्षातका समयमा पानी जमेर सडक बाहिर आउने गरेको छ । जथाभावी तथा अव्यवस्थित रुपमा ढल निर्माणले गर्दा वर्षको बेला सबै पानी सडकमा आउने गरेको छ । त्यस्तै घरबाट निस्किएको फोहोरमैलालाई सिधै पानीसंगै बगाउने र जथाभावी फालेका कारण उक्त समस्या आएको हो ।
वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने नारायणटार, जोरपाटी र बौद्ध सडक सवारी सधान गुडाउन भन्दा धान रोप्न योग्य देखिन्छ ।
मेयर सन्तोष चालिसेको घर जाने बाटोको अवस्था
त्यस्तै नवनिर्वाचित गोकर्णेश्वर नगरका मेयर सन्तोष चालिसेको गाडी गुडाउने बाटो आरुवारीमा पनि यस्तै अवस्था छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले गत वर्ष देखि पानी पाईप गाड्ने क्रममा लथालिङ्गा रुपमा बाटो भत्काएपछि समयमै काम सम्पन्न नगरेका कारण अहिले त्यहाँका बसिन्दाले सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।
अनिमियतता र अयोग्य ठेक्कापेटीलाई काम जिम्मा लगाएको कारण उक्त काम समयमै सम्पन्न नगरेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
बाटोका अवस्थाले गर्दा पटक पटक सवारी सधान दुर्घटना भएको र विरामी हुदा समेत अस्पताल पु¥यान कठिनाई परेको स्थानीयको गुनासो छ । उनिहरुका अनुसार मेलम्ची पानीको ठेक्का लिएको कम्पनी र ठेगेदारले एम्बुस थापेको भन्दै उनिहरु आक्रोशित छन् । आजै मात्र एक जना बच्चाको लडेर खुटट भाँच्चिएको छ । यस्तै घटनासंगै आफ्नो दैनिकीसंग जुधिरहेको छ । उक्त कार्य पुर्णरुपमा यथासिघ्रा सम्पन्न गराउन सरोकारवाला संग माग गरेका छन् ।
स्थानीयवासीले समयमै सडक विस्तारको कार्य सम्पन्न गर्न सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सडक विस्तारका क्रममा सडक छेउमा भएका घरहरु भत्किने क्रम जारी भएता पनि विवादका कारण काम रोकिएको छ । आफ्नो घर भत्किदा सरकारले कुनै क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन नगरेको भन्दै पक्ष विपक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।
सरकारले आफ्नो जग्गाको मुअव्जात दिएर सडक विस्तार कार्यलाई तिव्रता दिन जनप्रतिनिधिहरुलाई गुनासो पोखेका छन् ।
भोलीको लागी तय भएको ल्होछार बिशेष साँस्कृतिक कार्यक्रम मौसमका कारण स¥यो
बौद्धनाथ स्तुपालाई किन अशान्त पारिदै छ ?
बौद्ध बचाऔं संघर्ष समितिले थाल्यो चिनियाँ लामा हटाउ अभियान